OTU ESI EBUFE EGO IJI KWỤỌ ỤGWỌ NYE ONYE ỌZỌ - PAYPAL - 2019
Nyefe ego site na akpa ego PayPal na onye ọzọ
Mgbe ị na-arụ ọrụ na tebụl ma ọ bụ nchekwa data na ọtụtụ ozi, ọ ga-ekwe omume na ụfọdụ ahịrị ugboro ugboro. Nke a na-eme ka nchịkwa data dịkwuo. Tụkwasị na nke a, na ọnụnọ nke abụọ, nchịkọta na-ezighi ezi nke nsonaazụ na usoro bụ omume. Ka anyị hụ otu esi achọta ma wepu eserese abụọ na Microsoft Excel.
Chọọ na ihichapụ
Chọta ma hichapụ ụkpụrụ okpukpuchi nke a na-emegharị, ikekwe na ụzọ dị iche iche. Na nke ọ bụla n'ime nhọrọ ndị a, ọchụchọ na mkpochapụ nke oyiri bụ njikọ na otu usoro.
Usoro 1: nhichapụ nhichapụ nke ahịrị abụọ
Ụzọ kachasị mfe iji wepụ duplicates bụ iji bọtịnụ pụrụ iche na teepu e mere maka nzube a.
Họrọ otu okpokoro dum. Gaa taabụ "Data". Anyị pịa bọtịnụ ahụ "Wepụ Ntugharị". Ọ dị na teepu na ngọngọ nke ngwaọrụ. "Na-arụ ọrụ na data".
Iwepụ windo mbido meghere. Ọ bụrụ na ị nwere okpokoro na nkụnye eji isi mee (na ọtụtụ ndị ka na-abụkarị ikpe), mgbe ahụ banyere ihe dị oke "Ihe ndekọ m nwere isiokwu" kwesiri igbasa. Na isi oghere window bụ ndepụta nke ogidi ndị a ga-enyocha. A ga-atụle eserese dịka oyiri naanị ma ọ bụrụ na data nke ogige niile ahọrọ na akara akara. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị wepụ akara nlele site na aha otu kọlụm, ọ ga-esi otú a gbasawanye ohere nke ịmara ndekọ ahụ dị ka ugboro ugboro. Mgbe emechara ntọala niile, pịa bọtịnụ ahụ. "OK".
Excel na-eme usoro maka ịchọta ma wepụ mkpụrụ akwụkwọ abụọ. Mgbe emechara ya, windo ozi na-egosi, nke na - agwa gị ole ọnụ ọgụgụ ugboro ugboro wepụrụ na ọnụ ọgụgụ nke ihe ndekọ ndị ọzọ. Iji mechie windo a, pịa bọtịnụ ahụ. "OK".
Nzọụkwụ 2: Wepu Duplicates na tebụl Smart
Enwere ike iwepụ mkpụrụ akwụkwọ abụọ site n'ọtụtụ sel site na ịmepụta tebụl dị mma.
Họrọ otu okpokoro dum.
Ịbụ na taabụ "Home" pịa bọtịnụ ahụ "Hazie dị ka tebụl"dị na teepu na ngọngọ nke ngwaọrụ "Ụdị". Na ndepụta nke gosipụtara, họrọ ụdị ọ bụla ịchọrọ.
Mgbe ahụ, obere windo mepee nke ịkwesịrị iji gosi na ịhọrọ ahọrọ iji mepụta table dị mma. Ọ bụrụ na ịhọrọ ihe niile n'ụzọ ziri ezi, mgbe ahụ i nwere ike ikwenye, ọ bụrụ na i mehiere, mgbe ahụ a ghazi idozi windo a. Ọ dịkwa mkpa ịṅa ntị na eziokwu "Isiokwu na isiokwu" E nwere akọrọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ ga-etinye ya. Mgbe ntọala niile gasịrị, pịa bọtịnụ ahụ. "OK". Smart Table kere.
Ma ihe okike nke "tebụl dị mma" bụ naanị otu nzọụkwụ iji dozie ọrụ anyị kachasị mkpa - iwepụ nke duplicates. Pịa na sel ọ bụla na tebụl. Otu nchịkọta ọzọ nke taabụ gosipụtara. "Na-arụ ọrụ na tebụl". Ịbụ na taabụ "Onye na-ewu ụlọ" pịa bọtịnụ ahụ "Wepụ Ntugharị"nke dị na teepu na ngọngọ nke ngwaọrụ "Ọrụ".
Mgbe nke ahụ gasịrị, windo iwepụ akwụkwọ abụọ ahụ meghere, a kọwapụtara ọrụ ahụ nke ọma mgbe ọ na-akọwa ụzọ mbụ. A na-arụ ọrụ ọ bụla ọzọ n'otu usoro ahụ.
Usoro a bụ ihe kachasị mma na arụ ọrụ niile akọwapụtara n'isiokwu a.
Ihe omumu: Kedu esi emepụta spreadsheet na Excel
Usoro 3: tinye sorting
Usoro a anaghị ewepu duplicates kpamkpam, ebe ọ bụ na ụdị ahụ na-ezobe ihe ndekọ ugboro ugboro na tebụl.
Họrọ tebụl. Gaa taabụ "Data". Anyị pịa bọtịnụ ahụ "Nyocha"dị na ngọngọ ntọala "Tọọ na nyo".
Ntucha ahụ dị, dịka ihe ngosi na-egosi n'ụdị triangles agbanweghị na aha kọlụm. Ugbu a, anyị kwesịrị ịhazi ya. Pịa bọtịnụ "Di elu"emi odude ke kpukpru n̄kpọ ke otu mme utom emi "Tọọ na nyo".
Igwe nhazi nke elu mepee. Tinye akọrọ n'ihu nke oke "Naanị ntinye pụrụ iche". A na-ahapụ ntọala ndị ọzọ niile dị ka ndabara. Mgbe pịa na bọtịnụ ahụ "OK".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-ezoro ihe ndenye abụọ. Mana enwere ike igosi ha n'oge ọ bụla site na ịpị bọtịnụ ọzọ. "Nyocha".
Ihe omumu: Nnukwu Excel iyo
Usoro 4: Nhazi usoro
Ị nwekwara ike ịchọta mkpụrụ ndụ abụọ abụọ iji nhazi usoro okpokoro. N'eziokwu, a ga-ewepụ ha na ngwaọrụ ọzọ.
Họrọ mpaghara okpokoro. Ịbụ na taabụ "Home"pịa bọtịnụ ahụ "Nhazi usoro"dị na ngọngọ ntọala "Ụdị". Na nchịkọta na-egosi, nzọụkwụ site na nkwụsị "Iwu nke nhọrọ" ma "Atụmatụ abụọ" ....
Ntọala nhazi usoro a ga-emepe. Nke mbụ nke dị n'ime ya ka agbanweghi - "Ụdị". Ma na nhọrọ nhọrọ, ịnwere ike ịhapụ ntọala ndabara ma ọ bụ họrọ ụcha ọ bụla na-adọrọ gị, wee pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Mgbe nke a gasịrị, a ga-ahọrọ mkpụrụ ndụ nwere ọnụọgụ abụọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike iji aka gị hichapụ mkpụrụ ndụ ndị a n'ụzọ dị mma.
Ntị! Ịchọta ihe ederede site na iji nhazi usoro adịghị eme na eriri dịka dum, ma na sel ọ bụla karịsịa, ya mere, ọ gaghị adaba maka ihe ọ bụla.
Ihe omumu: Nhazi usoro na Excel
Usoro 5: jiri usoro a
Tụkwasị na nke ahụ, a pụrụ ịchọta akwụkwọ edemede site na itinye usoro ahụ iji ọtụtụ ọrụ n'otu oge. Site n'enyemaka ya, ị nwere ike ịchọgharị mkpụrụ edemede na kọlụm ụfọdụ. Ụdị isi nke usoro a ga-ele anya dị ka ndị a:
= Ọ BỤRỤ na ERROR (INDEX (column_address; MATCH) (0; comp.
Mepụta kọlụm dị iche iche ebe a ga-egosipụta mbipute.
Tinye usoro maka template ahụ dị n'elu na sel nke mbụ nke kọlụm ọhụrụ. N'okwu anyị kpọmkwem, usoro ahụ ga - abụ:
= Ọ BỤRỤ na ụzụ (INDEX (A8: A15; MATCHES (0; Akaụntụ (E7: $ E $ 7; A8: A15) + Ọ BỤRỤ na (Akaụntụ (A8: A15; A8: A15)> 1; 0; 1); 0); "")
Họrọ otu mkpokọta maka duplicates, ma e wezụga maka nkụnye eji isi mee. Debe cursor na njedebe nke usoro mmanya. Pịa bọtịnụ na keyboard F2. Wee pịnye igodo ahụ Ctrl + Shift + Tinye. Nke a bụ n'ihi peculiarities nke itinye ihe eji eme ihe n'usoro.
Mgbe omume ndị a na kọlụm "Ụdị" E gosipụtara ụkpụrụ abụọ.
Ma, usoro a ka dị mgbagwoju anya maka ọtụtụ ndị ọrụ. Tụkwasị na nke ahụ, ọ gụnyere naanị nchọnchọ maka oyiri, ma ọ bụghị iwepụ ha. Ya mere, a na-atụ aro ka ị jiri ngwọta dị mfe na arụ ọrụ akọwapụtara na mbụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, na Excel, e nwere ọtụtụ ngwaọrụ ndị e mere maka ịchọ na ihichapụ oyiri. Onye ọ bụla n'ime ha nwere àgwà nke ya. Dịka ọmụmaatụ, nhazi usoro nkwado gụnyere ịchọpụta ihe abụọ maka mkpụrụ ndụ ọ bụla iche. Na mgbakwunye, ọ bụghị ngwaọrụ niile nwere ike ọ bụghị naanị nyocha, kama hichapụkwa ọnụọgụ abụọ. Nhọrọ kachasị elu bụ iji mepụta tebụl dị mma. Mgbe ị na-eji usoro a, ị nwere ike ịmegharị ọchụchọ abụọ dị ka nke ọma ma dị mfe dịka o kwere mee. Tụkwasị na nke ahụ, iwepụ ha mere ozugbo.
https://termotools.com ig.termotools.com © Paypal 2019